Inguqulo 0.6.4 – I wezicathulo ayisekho zicathulo
Okthoba 14, 2010 by okunikezwayo 2 Amazwana
Manje thina ahlanganyela akekho omunye kuka Math Mullenweg, uMdali yesikhulumi WordPress.
In okulandelayo interview inkohliso ngokuphelele, Math kuyosisiza sonke aqonde ukuthi yini entsha in 0.6.4:
Ofer: Sawubona Math, unjani namuhla?
Math: Angikaze kakhulu iphuzu 0.01 ukukhululwa kwe-plugin ngaphambi!
Ofer: Kungani leso?
Math: Ngicabanga ukuthi ekugcineni ukuthola umoya wordpress kule ukukhululwa
Ofer: Ingabe I?
Math: Yebo, usuke ekugcineni ukuhlanganisa ephethe yesikhulumi esikhundleni nokugenca bazungeza, I ngempela iqiniso lokuthi wena ekugcineni wathatha isikhathi futhi enziwa plugin esibonakalayo kanye nokuphatha yakho amakhasi lihumushekela, futhi njengoba lelo okuhle, uthola Blog mahhala!
Ofer: Nikeza, ngiyabonga! Manje loku ngifika abanye abantu ukuba benze izinguqulo of plugin yami?
Math: Vele cela abasebenzisi bakho ukwenza lokho, Ngiyaqiniseka ukuthi uzoba ibanike ngesikweletu.
Ofer: Tell kwabo yonke le nto mayelana poedit and Izinto?
Math: Woza, njengoba ngikusho njalo, kukhona a plugin salokho! Futhi kufanele wazi njengoba elihunyushwe wona ngokwakho futhi nesandla ezinye fixes ezincane.
Ofer: Usho ukuthi codestyling kwasendaweni?
Math: Yebo, Yileso kunguye, ubani angaba ukuyisebenzisa. Kodwa nginombuzo ngawe
Math: Yebo, kungani akazange kokusebenzisa Transposh ngokwenza lelo?
Ofer: Ngempela abone isizathu, njengoba kukhona kakade plugin enkulu ngoba, kungani ukuphindaphinda?
Math: Ngiyabona ukuthi ekugcineni nilala it.
Ofer: Ukuthola ukuthi yini?
Math: Umoya wordpress, ukwabelana, abakhathalelayo, umthombo ovulekile, nothando mahhala.
Ofer: I isiqiniseko Ngethemba kanjalo, ngibonga kakhulu ngokuba nathi.
Math: Ngiyabonga, Ngesikhathi esilandelayo, sicela izingxoxo me on isici esiyinhloko, uma Kwadingeka ukuba akwenze interview eziyisikhohlisi yonke plugin ezincane ukukhululwa in wordpress, Angisoze naso isikhathi ukuze empeleni ngcono wordpress nize wordcamps.
Ofer: Will Mqaphele, ngiyabona futhi!
Well, ngiyabonga Math ngokuhlanganyela nathi, ezinye izici futhi wanezela kule nguqulo kuba inguqulo Latin added (nge-Google support translation), wanezela ku-Bing izilimi ezintsha ezintathu yokuhumusha. Ikhono uvimbele ukuhlanganiswa gettext lapho kubangela izinkinga, nabathile fixes nezinye.
Njengenhlalayenza – sethemba ukuthi uzokujabulela nguqulo
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: bing (MSN) umhumushi, izingxoxo eziyisikhohlisi, gettext, google ukuhumusha, Math mullenweg, minor, izilimi ezingaphezu, ukukhululwa
Inguqulo 0.5.7 - Amawijethi Pluggable
July 11, 2010 by okunikezwayo 37 Amazwana
UPawulu kokuba nephephandaba Transposh team
Sasimema UPawulu the octopus ukuze Transposh for ngixoxe besizulu alandelayo impumelelo yakhe yakamuva endebeni jikelele. Thina wamcela ukuba azenzele izibikezelo ambalwa kithina mayelana version okuzayo Transposh, futhi kusukela emva nokuphuza ngokweqile wayengumuntu wokubambisana ngempela kwakufanele thina ithuba lokwenza i interview okukhethekile naye.
Emva kwalokho okuyingxenye waba Kinda buthule, futhi wakhumbuza nathi by ezazibenyezela ukuthi ingwane abakwazi ukukhuluma ngempela. Ngakho sanquma hamba for amabhokisi amabili nobuqili, sibeka ibhokisi ne isithombe nice of a omkhulu, kanti enye ne isithombe isici (huh?), futhi thina walindela ngaye ukuvula yimiphi ibhokisi wabona kufanelekile. Ngokwemvelo wavula ibhokisi bug, okuyinto sabona njengesizathu ukubhala isixwayiso evamile ukuthi izimbungulu bangase ulimi lushelele ngisho Isibonelo sethu (ngisho ngosizo umprofethi eyisishiyagalombili ahlomile ukusebenzela ngathi on QA). Sasisebenzisa ithuba ukubhala isiqondiso esheshayo kanjani ukuze uthole inguqulo lokuthuthukiswa for ukulungisa iphutha on thwebula lethu.
Futhi inothi last, noma ubani ofuna ezosisiza (noma umlenze), noma ufuna ukwabelana indalo yakhe widget nezwe kungaphezu wamukela ukuxhumana nathi.
Jabulela nomdlalo zanamuhla, noma imiphi imibuzo uPawulu izodluliselwa ngqo kuye.
P.S – share kokujwayelekile bug fixes akhulunywe, fixed a izilimi ezimbalwa MSN yokuhumusha futhi wanezela a izilimi ambalwa izilungiselelo (yize kunjalo auto lihumushekela – kodwa ngokushesha ibe)
Update: ngenxa a bug esibucayi otholakala kwezinye izimo, 0.5.6 wafelwa indawo 0.5.7 ngiyabonga ngoba bonke labo wabikela, nge Sibonga ngokukhethekile dgrut.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: bing (MSN) umhumushi, izingxoxo eziyisikhohlisi, minor, ukukhululwa, iwijethi, plugin wordpress